Inkonzo yemigca yeeGlave yokuGcina izixhobo zeglavu sisixhobo esikhulu sobungakanani. Kukho iimfuno ezithile kubungakanani bendawo yokusebenzela kunye nemimandla enxulumene noko. Iqela loyilo likaChuangmei liya kubonelela ngeiglavu zobuchwephesha kunye nesayensi
I-Quanzhou Chuangmei Intelligent Technology Co., Ltd ngumvelisi ovelayo ovelisa, uyila, kwaye uvelise zonke iintlobo ze-nitrile, latex, kunye nezixhobo zeglavu ze-PVC. Sinobuchwephesha obuvuthiweyo kunye nezixhobo zemveliso epheleleyo. Umasifundisane wahlulwe ...
Ukufakwa kwemigca yeglavu yemveliso yeglavu kunye neenkonzo zokugunyazisa zahlulwe zaziindidi ezimbini zilandelayo: Inkonzo yokufaka isikhokelo kufakelo olusisiseko: 1) Emva kokuba izixhobo nezinto zithunyelwe kwisiza, ikhontraktha ngokubanzi okanye i ...
1. Inkampani yethu iya kubonelela ngezixhobo ezi-odolwe ngumsebenzisi ukuba zikhokele ufakelo kunye nokugunyaziswa kude kusebenze ngokwesiqhelo; 2. Inkampani yethu ibonelela abasebenzisi ngokusebenza ngokusisiseko kunye neenkonzo zoqeqesho lolondolozo lwemihla ngemihla simahla kwindawo yokufaka ...